March 2021 - ApannPyay Media
အိမ်က မိန်းမ ကိုကွာရှင်းပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျား ၁ ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ
March 31, 2021 by ApannPyay Media
အိမ်က မိန်းမ ကိုကွာရှင်းပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျား ၁ ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဖတ်ကြည့်ရင် အကျိုးမယုတ်မယ့် စာ (ဘာသာပြန်) အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ် ကျွန်တော့်ဇနီး ညစာပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ “မင်းကိုငါ ပြောစရာရှိတယ်” သူကတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေပြီး ညစာစားနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ နာကျင်မှုကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်ကစပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘာတွေ တွေးနေတယ် ဆိုတာကို သူ့ကိုပြောရမှာပါ။ ကျွန်တော် သူ့ကို ကွာရှင်းဖို့ ကိစ္စပေါ့။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ကျွန်တော်စပြောခဲ့တယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာတော့ ကျွန်တော့်စကားလုံးတွေ ကို စိတ်ပျက်နေပုံမတွေ့ရဘူး။ ကျွန်တော့်ကို နူးညံ့စွာပဲ မေးခဲ့ပါတယ်။ “ဘာကြောင့်လဲ” တဲ့။ သူ့မေးခွန်းကို … Read more
ချွေးထွက်လွန်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အနံ့အသက်မကောင်းရင်
ချွေးထွက်လွန်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အနံ့အသက်မကောင်းရင် ရာသီဥတုပူလောင်အိုက်စပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ချွေးထွက်များခြင်း၊ ချွေးထွက်လွန်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြင်းထန်စူးရှတဲ့ကိုယ်နံ့တွေက စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာ အမှန်ပါပဲ။ ချွေးထွက်လွန်ပြီး အနံ့အသက်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် လူကြားထဲမှာ မဝံ့မရဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ ကိုယ်နံ့ကို ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက် ရေမွှေးတွေ၊ Roll-On တွေ သုံးပေမယ့် သူတို့တွေကလည်း ခဏ နာရီပိုင်းလောက်ပဲ ကူညီပေးနိုင်ကြတာပါ။ ဒါဆိုရင် လူကြားထဲမှာ မဝံ့မရဲဖြစ်စေတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်နံ့ကို ဖျောက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်းတွေ မရှိတော့ဘူးလား။ရှိတာပေါ့။ သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းတွေက ပေါမှပေါပါ။ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့် စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေပါပဲ။ အုန်းဆီ ကိုယ်သင်းနံ့လေးကို သင်းပျံ့စေဖို့အတွက် အုန်းဆီက ကောင်းကောင်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်နံ့ မနံအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ရေချိုးပြီးတဲ့အချိန်တိုင်း ဂျိုင်းကြားနေရာကို … Read more
ဝါနေတဲ့သွားလေးတွေကို ပြန်ပြီးဖြူဝင်းစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ
ဝါနေတဲ့သွားလေးတွေကို ပြန်ပြီးဖြူဝင်းစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ လူတိုင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အပြုံးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါမယ်။ သွားလေးတွေ ဖြူဝင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အပြုံးဟာ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီး လှပနေမှာပါ နို့မှုန့်နဲ့ သွားတိုက်ဆေး နို့မှုန့်က သင့်ရဲ့ သွားကို ဖြူဝင်းစေဖို့ ကူညီပေးပါ။ နို့မှုန့်နဲ့ သွားတိုက်ဆေးရောပြီး သွားကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သေချာတိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် သွားတွေ ဖြူဝင်းစေဖို့ အကူအညီဖြစ်စေမှာပါ။ တစ်ပတ်ကို ၁ ကြိမ် (သို့) ၂ ကြိမ်လုပ်ပါ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ သံပုယိုရည် (သို့) သံပုရာရည် မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနည်းနည်းနဲ့ သံပုယိုရည် (သို့) သံပုရာရည် ရောပြီး ပျစ်ပျစ်လေးဖျော်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် သွားတိုက်တံပေါ်တင်ပြီး သွားတိုက်ပေးပါ။ ၁ ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောကပဲ အသုံးပြုပါ သွားတိုက်ဆေး၊ ဆား၊ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ သံပုယိုရည် … Read more
အညာဒေသမှာ အရမ်းပေါပါတယ် ခုမှဆေးဖက်ဝင်မှန်းသိတယ် အညာဒေသ မိုးခေါင်ဒေသ အရမ်းပေါပါတယ်ဆေးဖတ်ဝင်မှန်းခုမှသိတယ် ဆီးချို နှလုံး အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါအကုန်ကြိုတင်ကာကွယ်နိူင်သတဲ့ တဇောင်းဖူး or ပဒုမ္မာဖူး အညာမှာ အခုချိန်အရမ်းပေါတဲ့ ရာသီစာလေးပါ။ထဇောင်းဖူးကို အလည်ကခွဲ ဝတ်ဆံတွေထုတ်ကြိုက်သလိုလှီးပြီး တနေလောက် လှန်းထားပါ နေလှန်းထားတဲ့ ထဇောင်းဖူးလေးတွေကို ရေဆေးစစ်ထားဒယ်အိုးမှာ ဆီပါးပါးထည့်ခရမ်းချဉ်သီးကိုအနှစ်ချငပိ ပုစွန်ခြောက်မှုန့် နဲနဲထည့်ပြီး ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီးကြော် ငြုပ်သီးလေးကြိတ်ထည့်ပြီးရင် ထဇောင်းဖူးထည့် အပေါ့အငံထည့် ရပြီ သူ့အရသာကတော့ မှိုလေးလိုပေါ့ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့အပွင့် ဆီချိုရောဂါကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် သွေးတိုရောဂါကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် နှလုံးရောဂါကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် အပွင့်ကိုပြုတ် အရည်သောက်ပါ ဆီးချို သွေးချိုရောဂါကိုပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ် အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကိုရောဂါပိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်……။ Credit အညာေဒသမွာ အရမ္းေပါပါတယ္ ခုမွေဆးဖက္ဝင္မွန္းသိတယ္ အညာေဒသ မိုးေခါင္ေဒသ အရမ္းေပါပါတယ္ေဆးဖတ္ဝင္မွန္းခုမွသိတယ္ ဆီးခ်ိဳ ႏွလုံး အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါအကုန္ႀကိဳတင္ကာကြယ္နိူင္သတဲ့ တေဇာင္းဖူး or ပဒုမၼာဖူး … Read more
၄လပိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ tarot ဟောစာတမ်း ၄လပိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ၁။ အားလုံးမျှော့်လင့်နေတဲ့ အစိုးရသစ်ပေါ်ပေါက်လာပီး ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ဖွဲစည်းပီးအနေအထားပေါ်ပေါက်လာတက်ပါတယ်။ ၂။ စစ်အုပ်စုနဲ့ အစိုးရသစ်အကြား အခြေအနေတွေအရမ်းတင်းမာတက်ပီး အပြိုင်အဆိုင်နဲ့ စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ၃။ သိသာထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာရဲ့အကူအညီရရှိတက်ပေမယ့် မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေက ထင်ရှားတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ အရမ်းကို ခက်ခဲကြန့်ကြာတက်ပါသေးတယ်။ ၄။ အမျိုးသမီးတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ မထင်မှတ် ကောင်းသတင်းတွေကြားရတက်ပါတယ်။ ၅။ သေဆုံးမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်တက်ပီး ၂ရက်၊ ၄ရက်၊ ၈ရက်၊ ၁၁ရက်၊ ၁၃ရက်၊ ၂၂ရက်နေ့တွေ့မှာ သိသိသာသာဆိုးရွားတက်ပါတယ်။ ( မီးလောင်မှုများ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေဆုံးမှုများ) ၆။ ဧပရယ်လရဲ့ တတိယအပတ်ထဲမှာတော့ အားလုံးအတွက် သတင်းကောင်းတွေကြားရတက်ပီး စစ်အုပ်စုဘက်က အကြီးအကဲတစ်ဦး ထိခိုက်တက်တယ်။ ၇။ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်လို့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှ ဦးဆောင်ပေးနိုင်သူပေါ်လာတက်ပီး … Read more
သံပုရာသီးစိမ်ထားတဲ့ရေကို အမြဲသောက်ပေးခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ
သံပုရာသီးစိမ်ထားတဲ့ရေကို အမြဲသောက်ပေးခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ သံပုရာသီးဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုစေတဲ့ ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်လို့နေပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူတွေဟာ ရိုးရိုးရေတောင်မဟုတ်တော့ဘဲရေထဲကို သံပုရာကွင်းလေးတွေ ထည့်ပြီးသောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုသောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးပြုစေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ (၁) ရေဓတ်ပိုပြည့်စေတယ် အမျိုးသမီးတွေဟာ ပုံမှန်ရေဓာတ် ၉၁ အောင်စလိုအပ်သလိုအမျိုးသားတွေကတော့ ၁၂၅ အောင်စတောင် လိုအပ်ပါတယ်။ဒီတော့ ရိုးရိုးရေသောက်မယ့်အစား အရသာနဲ့အနံ့ပါအောင် သံပုရာသီးလေးထည့်ပေးခြင်းဟာ ရေကိုပိုသောက်ချင်စိတ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ရေဓာတ်လည်း ပိုပြည့်ဝစေပါတယ်တဲ့။ (၂) ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် စီ သံပုရာသီးမှာ ဗီတာမင် စီပါဝင်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိမှာပါ။ဗီတာမင် စီ ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ဗီတာမင် စီ ဟာ antioxidant ဓာတ်ပေါကြွယ်ဝတဲ့အပြင် ကိုယ်ခံအားကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးတဲ့အတွက်သာမန်အအေးမိတာတွေအပြင် အူမဘကီးကင်ဆာ၊ သွေးတိုးခြင်းနဲ့ လေဖြန်းခြင်းတို့ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ … Read more
သွေးမှင် လေမှင် အတွက်မှတ်သားထားသည့်နည်း
သွေးမှင် လေမှင် အတွက်မှတ်သားထားသည့်နည်း .”သွေးမှင် လေမှင် အတွက်မှတ်သားထားသည့်” ၁ ။ သရက်ခေါက်နဲ့ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ သွေးပြီးလိမ်းပါ။ ။ ပျောက်ပါသည် ။ ၂ ။ တစ်နေ့မနက်တခါ ညနေတခါဂျင်းလက်တဆစ်ဝက်လောက်စားပေးပါ ။ သက်သာပျောက်ကင်းပါသည် ။ ၃ ။ မုန့်လုပ်ထညက်အညို နှင့်လယ်ကဇွန်းရွက်ကျိုပြီးအကြမ်းပုဂံတလုံးစာညမနက်သောက်ပေးပါ ။ ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးမရှိပါဘူး ၄ ။ ဘယဆေးဆိုင်မှာ မှင်သော်မေးဝယ်ပါ ။ မှင်သော်ကိုသံပုရာသီးနဲ့ဖျော်ပြီးလိမ်းပါ ။ မှင်သော်သုံးမျှင်လောက်ကိုရေနွေးဖြူကွမ်းသီးလုံးခန့်မှာထည့် ခဏအုပ်ထားပါ ။ မှင်သော်ပျော်သွားမည် အဲဒါကိုသောက်ပါ ပူပါသည်လက်တွေ့ပျောက်ပါသည် ။ ၅ ။နဂျီအိမ်လေးကိုအနည်းငယ်ဖဲ့ပြီလက်ဖဝါးပေါ်ရေအနည်းငယ်ထည့်ကာဖျော်ပြီးဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုဆုန်ပြီးလူးပေးပါနှစ်ရက်ခန့်လောက်လူးပေးရင်သွေးမှင်လေမှင်ပျောက်သွားပါမည် ။ ၆ ။ တိမ်ပြာ ဂမုန်းဥကို သန့်စ့်စင်စွာဆေးကြောပြီးထုထောင်း၍ အုံးပေးပြီးပတ္တီစည်းပေးပါ ။ နှစ်ခါလောက်ဆို သက်သာပျောက်ကင်းပါသည်။ ၇ ။ … Read more
ရေသန့်တစ်ခွက် နဲ့ တူတဲ့မိန်းကလေးတွေကို တန်ဖိုးထားကြပါ (ညီမလေးလည်း ရေသန့်တစ်ခွက်လိုဖြစ်ပါစေ)
ရေသန့်တစ်ခွက် နဲ့ တူတဲ့မိန်းကလေးတွေကို တန်ဖိုးထားကြပါ (ညီမလေးလည်း ရေသန့်တစ်ခွက်လိုဖြစ်ပါစေ) ရသေန့ျတဈခှကျနဲ့ တူတဲ့ဖွူစငျတဲ့ မိနျးမတှဟော လစြျလြူရူခံရတာမြားပါတယျ။ေ ရသန့ျဟာ အရသာကငျးမဲ့ပွီး အရောငျအဆငျး မရှိတတျပါဘူး ။ ရေဟာ ဖြူစင်ပါတယ် မစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုတောင် စင်ကြယ်အောင် ပံ့ပိုးလျှော်ဖွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေသန့်တစ်ခွက်နဲ့တူတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့တန်ဖိုးကို နားမလည်ကြပါဘူး။ အရောင်အဆင်း အနံ့အရသာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ အချိုရည်လို မိန်းမတွေကြတော့ ဂရုစိုက်ခံရတာများပတယ်။ သူတို့ရဲ့ အရောင်အသွေးနဲ့ အရသာဟာ လူတွေကိုစွဲဆောင်မှုတစ်ခုတော့ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိုရည်တွေ သောက်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာပါးစပ်ချဉ်တတ်ကြတာကိုတော့ သောက်သုံးဖူးသွားတဲ့သူတိုင်း သိကြပါတယ်။အမြဲလိုလိုမရှိမဖြစ် ရေကိုသောက်သုံးရပြီး ရေဟာမရှိမဖြစ်ဆိုတာလည်း သိကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် လွယ်လွယ်နဲ့ရနေတဲ့ရေတစ်ခွက်ကိုတော့တန်ဖိုးမထားတတ်ကြပါဘူး။ မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်တွေကလဲ ရေသန့်တစ်ခွက်နဲ့တူပါတယ်အရောင်အဆင်းမရှိပေမယ့် လူတိုင်းအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ပေါ့ပျက်ပျက် အပေါစားဆန်တဲ့ မိန်းမတွေကတော့အချိုရည်လိုပါပဲ။သူ့တို့ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းမရှိပဲ အရောင် အရသာနဲ့သာ ဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။တန်ဖိုးတော့ မရှိပါဘူး။ သင့်လက်ထဲမှာရော … Read more
အစားလည်းဆေး၊ဆေးလည်းအစာ(ကျွဲခေါင်းသီး) စောမျိုးမြင့်(တိုင်းရင်းဆေးသုတေသီ) Pho-095052028, ကျွဲခေါင်းသီး၏စားသုံးသင့်သောရောဂါများနှင့်သတိပြုဖွယ် အကျိုးပြုအဂ်ါ အစာအိမ်နှင့်အူမကြီးကိုအကျိုးပြုသည်။ အာနိသင် ကျွဲခေါင်းသီးသည်အပူကိုငြိမ်းစေပြီးရေငတ်ပြေစေသည်။သရက်ရွက်နှင့်Qi invigorateတို့ကိုဆောင်ရွက်သည်။ အာဟာရ ကျွဲခေါင်းသီးတွင် ကစီဓာတ်များစွာပါဝင်၍ အသားဓာတ်၊အဆီဓာတ်များ၊multivitaminsများ၊အော်ဂဲနစ် မဟုတ်သောဆားများလည်းပါဝင်သည်။ စားသုံးသင့်သောရောဂါများ ကျွဲခေါင်းသီးသည်အပူကိုငြိမ်စေသောကြောင့် နွေရာသီ၌ ပူပြင်းသောအပူဒဏ်ကြောင့် အပူရှပ်၊ဖျားသူ၊ပါးစပ်ခြောက်သူတို့ကို အပူဒဏ်ကိုကာကွယ်ပေးပြီးရေငတ်ပြေစေသည်။အပူကိုသက်သာစေရန်၊polydipsiaကိုသက်သာစေရန်၊အပူဖယ်ရှားပြီးအရည်ထုတ်လုပ်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။သရက်ရွက်ပူ၍ အစာအိမ်qiဓာတ်အားနည်းပြီး ဗိုက်နာ၍ဝမ်းလျှော့သူများ၊ညအသက်အရွယ်ကြီးပြီးအစာအိမ်နှင့်အူအားနည်းသူများအဘို့သင့်လျော်သည်။အစာပြွန်ကင်ဆာ၊esophagcal cancer,အစာအိမ်ကင်ဆာ၊သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊cervical cancet,တို့အတွက်သင့်တော်ပြီး၊ရင်သားကင်ဆာကိုအကျိုးပြုသည်။ သတိပြုဖွယ် ကျွဲခေါင်းသီးသည်အေးသောကြောင့်သရက်ရွက်နှင့်အစာအိမ်အေး၍အားနည်းလျင်မစားသုံးသင့်ပါ၊အအေးမိလျှင်လည်းရှောင်ကျဉ်သင့် သည်။ကျွဲခေါင်းသီးသည် ကစီဓာတ်များပြားစွာပါဝင်သောကြောင့် ဆီးချိုရောဂါရှိသူများများများမစားသုံးသင့်ပါ။ Ref. – zhonghua shiwu biandian ရိုးရာသဘာဝတိုင်းရင်းဆေးဖြင့်ကုသ၍သိပ္ပံနည်းကျပြန်လည်းစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ခြင်း မှတ်ချက်-ဆေးစစ်ချက်များယူဆောင်လာရန် စောမျိုးမြင့်(တိုင်းရင်းဆေးသုတေသီ) B.A(Psy.)D.B.S.,C.T.Med.(yangon) မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးဆရာအသင်းဝင် တရုတ်တိုင်းရင်းသမားတော်အဖွဲ့ဝင် အမှတ်(67)မှန်ခန်း၊A2,ပြည်တော်အေးလမ်း၊ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။(လေးထောင့်ကန်လမ်းမပေါ် ၊ စံပြစျေးAYAဘဏ်နောက်ကျောအနီး) Pho-09 5052028,09785052028, 09965052028,09695052028, (ရုံးချိန်အတွင်းသာ) အစားလည္းေဆး၊ေဆးလည္းအစာ(ကၽြဲေခါင္းသီး) ေစာမ်ိဳးျမင့္(တိုင္းရင္းေဆးသုေတသီ) Pho-095052028, ကၽြဲေခါင္းသီး၏စားသုံးသင့္ေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္သတိျပဳဖြယ္ အက်ိဳးျပဳအဂ္ါ … Read more